Maxa tahay sababta ay Soomaalida guryaha uga iibsanayaan dalka Turkiga? | Radio Hormuud
Madaxweynaha Soomaaliya oo xil u magacaabay Yuusuf Garaad
Diyaarad rakaab ah oo ku dhacday Garowe
Muqdisho oo laga qabtay xuska maalinta HIV-AIDS
Jadwalkii doorashada ee golaha aqalka sare oo fashilmay + sababta
Tan iyo sanadkii 2011-kii, markii uu Madaxweynaha Turkiga, Rajab Teyib Erdogan booqasho ku tegay Soomaaliya, oo xilligaas ay ka jireen abaaro ba'an ayaa wixii intaas ka dambeeyay waxaa xoogeystay xiriirka dadka Soomaalida iyo Turkida.
Booqashada Erdogan ee Muqdisho ayaa bilow u ahayd xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga, waxaana intii ka dambeysay la arkay Soomaali badan oo dalkaas u tegaya ganacsi, waxbarasho, dalxiis iyo in ay deegaan ka sameystaan.
Xaafadda Mamaak ee Magalada Ankara ee dalka Turkiga, oo ah xaafadda ay ku badan tahay soomaalida Ankara ayaa waxaa si xawli ah uga socda dhismaha guryaha dabaqyada ah, kuwaas oo ay inta badan iibsadeen dad Soomaali ah oo doonaya in ay deegaan ka sameystaan dalkaas. Dhismaha guryaha cusub waa mid midka kale kuu dhiibaya.
Marka aad ku dhex lugeyso xaafadda Mamaak, waxay idhahaagu qabanayaan dhismayaal ay ka lalaadaan xarkaha dharka lagu warto oo ay ku waran yihiin dharka Soomaalida sida macawisaha ragga iyo diracyada dumarka, luuq walba oo aad martana, waxaad ku arkeysaa qof Soomaali ah, taas oo laga dheehan karo sida Soomaalida tageysa dalka Turkiga ay usoo badanayaan.
Qaar kamid ah dadka Soomaalida ee guryaha ka iibsaday dalka Turkiga ee ka tegay deeganaada Soomaalida iyo qurbaha ayaa BBC-da u sheegay in sababa dhowr ah ay ku xusheen Turkiga.
"Dalka Turkiga waxaan ku doortay waxa weeye arrimo dhowr ah, waxaan helay noolal raqiis ah, dugis Qur'aan, Misaajidkii, nabadgelyo iyo jaceyl nala jacel yahay; noolasha waa mid isa saaran oo raqiis ah, guryahana way kala duwan yihiin, balse marka loo eego meelaha kale ee ay Soomaalida guryaha ka iibsata sida Kenya, Yurub ama deeganaada Soomaalida, aad bay u raqiisan yihiin guryaha Turkiga", ayuu yiri Suldaan Timacade oo kamid ah Soomaalida guryaha ka iibsaday Magaalada Ankara ee dalka Turkiga.
Wuxuu intaa ku daray in guri kor iyo hoos ah oo afar qol iyo fadhi ka kooban uu ku iibsaday lacag dhan kontan iyo shan kun oo doolar.
"Noolasha waa raqiis, cuntada Turkigana waa raqiis, qofka wax yar ayuu ku noolaan karaa, oo reer dhan oo qoys ah wuxuu biilan karaa saddex boqol oo doolar oo nolal heer sare ah", ayuu raaciyay.
Inta badan guryaha ay iibsadaan Soomaalida ayaa waxaa dhisa shirkado guryaha dhisa oo ay leeyihiin dad Soomaali ah, kuwaas oo ka diiwaangashan dalka Turkiga, hasayeeshe qaar kamid ah dadka iibsanaya guryaha ujeeddadoodu ma ahan oo keliya in ay deegaan ka dhigtaan Turkiga ee waxaa ay sidoo kale doonayaan in ay sii xoojiyaan xiriirka Soomaalida iyo Turkida.
Sababta ay guryaha dalka Turkiga raqiis u yihiin marka loo eego guryaha kale ee laga dhiso deegaanada Soomaalida ayay shirkadaha ku shegeen in ay tahay qiimaha qalabka dhismaha ee Turkiga oo aad u jaban, maadaama gudaha dalka lagu farsameeyo.
"Sababta ay Soomaalida guryaha uga iibsadaan Turkiga waxa weeye, guryihii oo jaban, nolashii oo raqiis ah, qofka yimaadaa dalka Turkigana in uu helo sharciga Turkiga, waxaa u suurtagalinaya boqol doolaar oo keliya, qofka marka uu guri ka dhisanayana waxaa asal u ah laba shay oo kala ah in uu rabo in uu ku noolaado dalka Turkiga, iyo intooda bandan oo doonaya in ay u abaal gudaan madaxweyne Erdogan iyo dowladiisa, maadaama ay inoo soo gurmadeen xilli adag, si ay u noqoto abaal gud canshuur oo ay bixiyaan", sidaas waxaa BBC-da u sheegay Farxaan Maxamed Dhoore oo ah milkiilaha shirkadda dhismaha guryaha ee Guuleed ee Magaalada Ankara ee Turkiga.
Waxaa kale oo uu Farxaan BBC-da u sheegay in qiyaastii bil walba ay Soomaalida iibsadaan konton guri, guryaha Soomaalida ay ka iibsatay Magalaada Ankarana ay gaarayaan laba kun iyo shan boqol oo guri.
Sawirka laga heystay xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga waxaa uu sanadihii dambe ahaa mid ku qotoma taageerada Turkiga uu siiyo Soomaaliya, balse haatan oo Soomaali badan ay maalgashi ku sameeyeen dalkaas, waxaa muuqata in Turkiga uu sidoo kale ka faa'iday xiriirka Soomaalida, halka kan mustaqbalka ee labada dhinac uu ka duwanaan doono wixii looga bartay sanadihii dambe.
Somaliland oo toogasho ku fulisay 6 qof + magacyada
Ifraax Cabdishakuur oo noqotay gabadha ugu quruxda badan deeganka…
Vanvidsbilist dræbte femårig pige: Sendte ung kvinde i livstruende koma for to år siden
Er det Trumps vilde plan? Undersøger muligheden for at benåde sine børn
Foto viser soldater drikke af skudt Taliban-krigers protese